Hogaan dhaqameedka Beelaha Warsangeli oo Hadhimo sharafeed Qado, aan loo kala hadhin loogu Sameeyey Caasimada Somaliland?.
Thursday April 11, 2019 - 17:34:48 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)-Munaasibad balaadhan, oo kulmisay wajiyo dhaqan oo kala baaday, ayaa ka dhacday Huteel Grean Hadi ee Magaalada Hargeysa.
Qado-sharaftan ayaa lagu casuumay Maanta madax-dhaqameed kasoo jeeda bariga Sanaag, kuwasoo kala ahaa Suldaan Maxamed Suldaan Cabdilahi Cartan, oo ah Suldaanka Guud ee Beesha Dubeys ee Warsangeli, Iyo sidoo kale, hal isim iyo laba Suldaan iyo sidoo kale, 35 caaqil.
Sullaadin iyo waxgaraadkaa oo kasoo kicitimay bariga Sanaag, ayaa waxa caasimada Somaliland kusoo marti qaaday Madaxweynaha, kuwasoo hawlo shaqo loogu yeedhay.
Hadhimo sharafeedkan ayaa waxa kasoo qaygalay waxgarad reer Somaliland Iyo sidoo kale madax sarsare oo Kamid ah Xukuumada Somaliland, oo u Kamid yahay Maareeyaha Dekeddah Somaliland Siciid Xasan Cabdilahi iyo duqa Caasimada Soltelco.